Saafi Films - News: 80-sano ka dib Wargeyska Newsweek oo la joojinayo.
80-sano ka dib Wargeyska Newsweek oo la joojinayo.
ariirada caanka ah ee Newsweek ayaa sheegtay in ay soo saari doonto 23 bisha December cadadkii ugu dambeeyay ee ku qoran warqad. Jariiradan oo soo jirtay 80 sano ayaa bilaabi doonta sanadka cusub in ay ku soo baxdo oo kaliya Bogga internet.
Jariiradan oo ka soo baxda dalka Mareykanka Ayaa kusoo Baxaysay Luuqado fara badan oo ay ugu horeyso Luuqada Ingriiska.
Sidaa Warkan Ka soo Baxay shirkadda Lagu sheegay, Waxaa sabab looga dhigay Dhaqalo xumo soo wajahay Shirkadda oo keenay in ay talaabadan ku dhaqaaqdo iyada oo rabta in ay dhinto shaqaalaha.
Sidoo kale waxaay kari wayday Qaybinta iyo daabacada kharashka ku baxaya, Iyadoo Wararka Jariiradda kusoo bixi lahaa Ay dadka kaga horeeyaan dhanka shabakada internetka, taasi oo wiiqday Macaamiishii badneed ee jariirada iibsan jirtay.
Tafaftiraha jariirada ayaa sheegtay in ay tani Macnaheeda Aysan Aheyn dhamaadkii majalada ee ay tahay hab cusub oo ay qaateen si ay ula socdaan isbadalka cusub ee nolosha iyo Mid Ay kula Tartamayaan Warbahinta Aalladda Casriga Isticmaasha ee Qarniga.
4,505,500 unique visits